Photos: "A Mat Ta Ya Phit Say" Music Concert in Yangon | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos: "A Mat Ta Ya Phit Say" Music Concert in Yangon
Here are photos of "A Mat Ta Ya Phit Say" Music Concert which was held on April 4, 2012 at Maw Sin Gyun, Kan Daw Kyi Park, Yangon. The concert was held as the mark of Composer Soe Lin's "20 Years Anniversary in his Artist Career".
ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့က မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ "အမှတ်တရဖြစ်စေ" ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
Myanmar Hot Model Marinar
"A Mat Ta Ya Phit Say" Music Concert
တေးရေး စိုးလင်းရဲ့ အနုပညာသက်တမ်း အနှစ် (၂၀) ပြည့် အမှတ်တရ ဖြစ်စေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
mourineApril 6, 2012 at 12:53 AMခေတ်တွေ တအားကိုမှီလာကြတယ်နော်.......International standard မှီလာကြတယ်ဆိုရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့........ တမျိုးလေးပဲ.. စိတ်ထဲမှာ.....ReplyDeleteသခါင်္ရApril 6, 2012 at 4:10 AMGood DddddddddReplyDeletetinApril 6, 2012 at 8:44 AM၂မိနစ် တစ်ပုဒ် ကိုစိုးလင်းလား အရမ်းငပေါကြတယ် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးက မကြိုက်ကြပါ။ ကလေးလို ငပေါလိုတွေ မရေးပါနဲ့လို့ReplyDeleteRepliestin ko mgApril 7, 2012 at 3:57 AMtin ပြောတာ မှန်တယ် စိုးလင်းဂျပုက အရက်သမားနှာဗူးပိူက်ဆံရပြီးရောလုပ်တာDeleteReplypieApril 6, 2012 at 9:01 PMdesign လေးတွေတော်တော်လန်းလာပြီ ... မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့ .. (=ReplyDeleteAngelApril 6, 2012 at 11:22 PMkyi ya tar....sate sin ye' sa yar kaung lite tar... :(ReplyDeleteHeroApril 9, 2012 at 2:36 AMစိုးလင်း သီချင်းတွေက အရည်အချင်းထက်ကို အရေအတွက်ပဲများပါတယ်ထင်သလောက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဘာတွေမှန်းလည်း မသိဘူး။ ပိုက်ဆံရှိရင်လည်း တကယ်တော်တဲ့သူတွေကို လုပ်ပေးလိုက်ပါလား။ ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ဒါပေမဲ့ နေရဲမာန်လောက်တော့လည်း မဆိုးသေးပါဘူး။ ဒီအခွေမှာသုံးထားတဲ့ performance တွေကလည်းနော်။ တကိုယ်လုံးပဲ ချွတ်ပြီး ရိုက်လိုက်ရင်သိပ်ကောင်းမှာနော် .. .. .အားလုံး ပြူနေမှာပဲ အဟိ .. ... အဟိReplyDeleteMeeMoeApril 25, 2012 at 11:36 PMtin (ခ)tin ko aung (ခ) မေလတ် ဆို တာ သာကေတမှာနေတဲ့ နေရီတို့သူငယ်ချင်းမဟုတ်လားဟင် တို့ကို mail address ပေးထားတာလေ အဲဒီအခွေထွက်တဲ့နေ့က တို့အုပ်စုနဲ့အတူတူသွားကြည့်ကြတာလေ တို့တွေကြိုက်လို့သီချင်းလိုက်ဆိုချိန်မှာ ယူက လက်ခုပ်တီးပြီး တောင်လိုက်ကနေသေးတယ်အခုဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဟင်ReplyDeleteNaing GyiMay 8, 2012 at 8:29 PMအနည်းစုသော ကွန်မန့်ဝင်ရေးသူတွေ တကယ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ကျနော်သီချင်းနားထောင်ရင် သီချင်းရေးတဲ့လူကိုမှတ်ထားလေ့မရှိလို့ သိပ်မသိပါ ဒါပေမဲ့ လူကို အပုပ်ချနေတာလား သီချင်းဝေဖန်ကြတာလား အဆင့်မရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ လမ်းဘေးခလေးပြောသလို ၀င်ရေးတော့ နည်းပညာတိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာ ဒီလိုလူတွေရဲ့ အဆင့်ဟာ webpage တွေပေါ်မှာရှက်စရာဘဲ ဟာသကားရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင်တွေကို ငပေါတွေ ပြောသင့်လား၊ ဒီလူရေးတာမကြိုက်ရင် အစထဲက ဒါကိုဝင်မကြည့်ရုံဘဲလေ ဘာပြောပြော ငါ့ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အကုသိုလ်ယူနေကြတာ...အဆင့်ရှိကြပါဗျာReplyDeletebarbie barbieJuly 3, 2012 at 7:29 AMငါက တော့တခု ပြောမယ် တေးရေးနဲ့မဆိုင်ဒီအခုအဆိုတော်တွေထဲမှာအဆိုတော်မလုပ်သင့်တဲ့သူတွေပါတယ်လို့င်ထတယ် ဒါဘဲMYANMARသီချင်းလောကကိုမှေးမှိန် လို့ပုတ်အဲ့စေတယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...